တရုတ် မှာ ဖြစ် နေ တဲ့ ဗိုင်း ရပ်စ် အ သစ် TICK-BORNE VIRUS အကြောင်း နှင့် ဆောင် ရန် ရှောင် ရန်များ. – Shwewiki.com
August 11, 2020 By admin News
တရုတ်ပြည် အရှေ့ပိုင်း ရှိ Jiangsu တို့ Anhui တို့ ပြည်နယ် တွေမှာ တွေ့ရှိထားသတဲ့။ Jiangsu မှာ ၃၇ ယောက် တွေ့ပြီး Anhui မှာ ၂၃ ယောက်တွေ့သ တဲ့ ။ Tick-brone လို့ခေါ် ရ တာ က မွှားကိုက်ရာ ကနေရောဂါ စဖြစ်လို့ ပဲ။ Tick ကို ကျနော်က မွှားလို့ အကြမ်းဖျင်းဘာသာပြန်တယ်။ Tick ဆိုတာ တိရိစ္ဆာန်တွေ ကိုယ်ပေါ် အမွေးကြားမှာကပ်နေတဲ့ ပင့်ကူမျိုးနွယ်ဝင် ကပ်ပါး ကောင် တစ်မျိုး ပဲ။ flea က လှေးကိုခေါ်တာ ။ flea က ခုန်လို့ရ တဲ့ခြေထောက်တွေ ပါ တယ် ။ Tick မှာ မပါဘူး ။ တိရိစ္ဆာန်တွေဆီက သွေးစုပ်ပြီးတာ နဲ့ လေထိုးထားသလိုဖောင်းလာ တယ် ။ ( ပုံမှာကြည့်)
အဲ့ ဒီ tick ကိုက်တာ ကနေ tick-borne virus ကူးပြီး လူမှာကိုယ် ပူချိန်အရမ်း တက်တဲ့ Severe Fever with Thrombocytopenia Syndrome (SFTS) ရောဂါ ဖြစ်ပြီး တရုတ်ပြည် မှာ လူ ၇ ယောက်သေကာ အယောက် ၆၀ ရောဂါကူးစက်ခံ ထားရသတဲ့။ အဲ့ဒီတော့လည်း တရုတ်မှာ သတိပေးကြေညာချက်ထုတ်လာတာပေါ့။ အဲ့ဒီ SFTS ရောဂါဖြစ်စေ တဲ့ ဗိုင်းရပ်စ်မို့ SFTSV လို့အတိုကောက်ခေါ် တယ် ။ ဒါဆို ရင်ကြောက်ဖို့လို သလား …။ အဲ့ဒီ tick ဆိုတဲ့ မွှားလို ကပ်ပါးကောင်လေးတွေကနေ လူကိုကိုက်ရင် ရောဂါဖြစ်စေတယ်။ လူလူချင်းမကူးဘူးတဲ့။ လူလူချင်း Covid-19 ကူးသလိုမကူးလို့ ကျနော်တို့ဆီကို တရုတ်ပြည်ကနေ ရောက်လာမှာကို သိပ်စိုး ရိမ်စရာမလိုပါဘူး။ ဒါပေမယ့် အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်လေးတွေရဲ့ တကိုယ်ရေသန့်ရှင်းရေးကို ဂရုစိုက်ပေးဖို့လိုမယ်။
အိမ်မွေး တိရိစ္ဆာန်လေးတွေ ကနေ tick အကိုက်ခံရပြီး ကလေး၊ လူကြီးတွေ ရောဂါဖြစ်မှာတော့ သတိထားကြပါ။
အဲ့ဒီ tick တွေက တိရိစ္ဆာန်တွေ ကိုကိုက်ရင်သာ Severe Fever with Thrombocytopenia Syndrome (SFTS) ရောဂါလက္ခဏာ မပြတာ လူကို ကိုက် ရင်တော့ ကိုယ်ပူချိန် အလွန် တက်တာ မျိုး ရောဂါလက္ခဏာပြ ပါ သ တဲ့ ။ အဲ့ဒီ SFTS ရောဂါက လူသေဆုံးနှုန်းမြင့်တာကို ဂရုပြုပါ။ ဒါကြောင့် WHO ရဲ့ သတိထားရမယ့် Top 10 priority ရောဂါ ဆယ်မျိုးထဲမှာပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ ထပ်ဖြည့်ပြောချင် တာက tick-brone diseases (tick ကိုက်ရာကနေ ဖြစ်တဲ့ရောဂါတွေ) က ၁၆ မျိုးရှိတယ်။ tick ကိုက်လို့ ရောဂါဖြစ်စေတာက ဗိုင်းရပ်ကြောင့်ရော၊ ဘက်တီးရီးယားကြောင့်ရော၊ ပရိုတိုဇူဝါကြောင့်ရော ရောဂါပိုး မျိုးစုံကနေ ဖြစ်နိုင်တယ်။
tick ကိုက်လို့ ဗိုင်းရပ်ကြောင့် လို့ထင်နေပေမယ့် တခြားရောဂါ ပိုးတွေက လည်း တချိန်တည်း မှာရောဂါပြိုင်တူ ဖြစ်စေတတ်တာမို့ ရောဂါရှာရခက်ပြီး ကုသရာမှာ ခက်ခဲစေ တတ် တယ် ။ တရုတ်မှာ ပဲဖြစ်တယ် လို့ ထင်နေ လို့မ ရဘူး ။ အနောက်နိုင်ငံမှာလည်း ဖြစ်ချင်ဖြစ်တာပဲ ။ ထင်ရှားတဲ့ ဖြစ်ရပ်ကတော့ မနှစ်က ၂၀၁၉ ခုနှစ်မှာ အသက် ၆၆ နှစ်ရှိ အမေရိကန်အထက် လွှတ်တော် အမတ်ဟောင်း Kay Hagan တစ်ယောက် tick အကိုက်ခံရလို့ ရောဂါဖြစ်ပြီး သေခဲ့ပါရောလား။
အခု တရုတ် မှာ ရောဂါဖြစ်နေ တဲ့ tick မျိုး က အာရှမျိုးနွယ် Asian tick တဲ့ ။ အဲ့ဒီ Asian tick ကို Haemaphysalis longicornis လို့ခေါ်ပြီး SFTS ရောဂါကိုဖြစ်စေတဲ့ SFTSV ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကို သယ်ဆောင် တဲ့ အဓိက လက်သည် လို့ ယူဆထား ပါတယ်။ အဲ့ဒီ ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကို တရုတ်ပြည် Hubei နဲ့ Henan ပြည်နယ်ရှိ ကျေးလက် ဒေသတွေမှာ ၂၀၀၉ ခုနှစ် က စတွေ့ခဲ့တာပါ။ Hubei က ဝူဟန့်မြို့ရှိတဲ့ ပြည်နယ်ပါ။ အဲ့ဒီ ရောဂါဖြစ်ရင် သေနှုန်း ၃၀ ရာနှုန်းရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့် သတိထားဖို့လိုတာပါ။ အဲ့ဒီရောဂါက တရုတ်ပြည်မှာ ပူနွေးတဲ့ မတ်လကနေ နိုဝင်ဘာလအတွင်း ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ သုသေသနတွေအရ ဧပြီလနဲ့ ဇူလိုင်လထဲမှာ ဖြစ်ပွားမှုအများဆုံး လို့ဆိုပါတယ်။ တိရိစ္ဆာန်တွေနဲ့ ထိတွေ့ရတဲ့ လယ်သမားတွေ၊ မုဆိုးတွေ၊ အိမ်မှာတိရိစ္ဆာန်မွေးထား သူတွေဟာ tick အကိုက်ခံ ရပြီး tick-brone virus ကူးစက်နိုင် ပါသတဲ့။
အထူးသဖြင့် ဆိတ်၊နွား၊သိုး တို့ကနေ tick-brone virus ကူးစက်နိုင်တာ တွေ့ရပါသတဲ့။ အဲ့ဒီ SFTS ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ရင် ဘာရောဂါလက္ခဏာတွေပြသလဲ ၂၀၁၁ တုန်းက တရုတ် သိပ္ပံပညာရှင်တွေရဲ့ လေ့လာမှုအရ ရောဂါပိုးရှင်သန်ပေါက်ပွားတဲ့ incubation period က ရောဂါလက္ခဏာတစ်ခုပြအပြီးမှာ ၇ ရက်ကနေ ၁၃ ရက်ကြာပါသတဲ့။ ကိုယ်ပူချိန် တက်မယ် ၊ ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မယ် ၊ ခေါင်းကိုက်မယ် ၊ ခေါင်းမူးမယ် ၊ ဝမ်းလျောမယ် ၊ အန်မယ် ၊ ဗိုက်နာမယ် ၊ myalgia လို့ခေါ်တဲ့ ကြွက်သားတွေနာမယ်၊ anorexia လို့ခေါ် တဲ့ အစား အသောက်လျော့ မယ် ၊ သွေးကြောလေးတွေကသွေး ယိုမယ် ၊ အာရုံကြောစနစ်လက္ခဏာတွေအထိ စတာတွေပါပါသတဲ့။ စသိနိုင်တဲ့ early warning signs တွေကတော့ ကိုယ်ပူချိန်အရမ်းတက်တာ၊ သွေးခဲစေတဲ့ platelet တွေနည်းသွားလို့ သွေးမတိတ်တော့တာ၊ သွေးဖြူဥနည်းတာတွေ ဖြစ်စေပါတယ်။
အဲ့ဒီ SFTS ရောဂါဟာ တရုတ်ပြည်ပြင်ပ အနီးအနားမှာ ဘယ်နေရာမှာဖြစ်သေး သလဲ..? ဂျပန်နဲ့ 🇰🇷 တောင်ကိုရီးယားမှာ ဒီ SFTS ရောဂါဖြစ်တာတွေ့ရပါတယ်။ ၂၀၁၃ မှာ တောင်ကိုရီးယားမှာ ၃၆ ယောက်ကူးစက် ခံရတာကနေ ၂၀၁၇ မှာ ၂၇၀ အထိတက်လာ ခဲ့တယ် ။ တရုတ်မှာဆိုရင် ၂၀၁၀ မှာ ၇၁ ယောက်အကူးခံရပြီး ၂၀၁၆ မှာ လူ ၂၆၀၀ အထိကူးစက်ခံရ ခဲ့ပါတယ်။
ဂျပန်နိုင်ငံ မှာလည်း ၂၀၁၆ ကနေ ၂၀၁၇ အတွင်း ရောဂါကူးစက်ခံရမှု ၅၀ ရာနှုန်း တိုးလာခဲ့ပါတယ်။ အခုလို ဂျပန်၊ တရုတ်နဲ့ တောင်ကိုရီးယား သုံးနိုင်ငံမှာ ဆရာဝန်တွေနဲ့ ပြည်သူတွေ ဟာ ဒီရောဂါအကြောင်းကို ပိုသိလာကြပြီး ဂရုစိုက်ချိန်မှာ သေနှုန်းဟာ သိသိသာသာကျ သွားကြောင်းလေ့လာတွေ့ ရှိခဲ့ရပါသတဲ့။ ဒါဆိုရင် SFTS ရောဂါကိုဘယ်လို ကုသမလဲ…? SFTS ရောဂါကာကွယ်ဆေးက အခုထိမပေါ်သေး ပါဘူးတဲ့။ ကြိုးစားနေတုန်းပါ။ Ribavirin ဆေးကတော့ အဲ့ဒီရောဂါကို ကုသရာမှာ ထိရောက်မှုရှိတာကို တွေ့ရပါတယ်။ အဲ့ဒီ tick အကိုက်ခံရပြီး tick-brone virus အကူးမခံရဖို့က… မြက်တောထဲ၊ သစ်တောထဲ သွားရင် ဘောင်းဘီ အ င်္ကျီ အ တိုတွေ မ ဝတ် ဖို့ ၊ တိရိစ္ဆာန်ကနေ tick အကိုက်မခံရအောင် သတိထားဖို့ စတာတွေ သတိပြုရ ပါမယ် ။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် tick ကနေ tick-brone virus ကူးစက်ခံရနိုင် တယ် ဆို တာ လူတွေ သ တိပြုဂရုစိုက် တတ် လာ ရင် သေနှုန်း ကျ ဆင်း သွား မှာ ဖြစ်ပါကြောင်း။
တရုတျ မှာ ဖွဈ နေ တဲ့ ဗိုငျး ရပျဈ အ သဈ TICK-BORNE VIRUS အကွောငျး နှငျ့ ဆောငျ ရနျ ရှောငျ ရနျမြား.
တရုတျပွညျ အရှပေို့ငျး ရှိ Jiangsu တို့ Anhui တို့ ပွညျနယျ တှမှော တှရှေိ့ထားသတဲ့။ Jiangsu မှာ ၃၇ ယောကျ တှပွေီ့း Anhui မှာ ၂၃ ယောကျတှသေ့ တဲ့ ။ Tick-brone လို့ချေါ ရ တာ က မှားကိုကျရာ ကနရေောဂါ စဖွဈလို့ ပဲ။ Tick ကို ကနြျောက မှားလို့ အကွမျးဖငျြးဘာသာပွနျတယျ။ Tick ဆိုတာ တိရိစ်ဆာနျတှေ ကိုယျပျေါ အမှေးကွားမှာကပျနတေဲ့ ပငျ့ကူမြိုးနှယျဝငျ ကပျပါး ကောငျ တဈမြိုး ပဲ။ flea က လှေးကိုချေါတာ ။ flea က ခုနျလို့ရ တဲ့ခွထေောကျတှေ ပါ တယျ ။ Tick မှာ မပါဘူး ။ တိရိစ်ဆာနျတှဆေီက သှေးစုပျပွီးတာ နဲ့ လထေိုးထားသလိုဖောငျးလာ တယျ ။ ( ပုံမှာကွညျ့)
အဲ့ ဒီ tick ကိုကျတာ ကနေ tick-borne virus ကူးပွီး လူမှာကိုယျ ပူခြိနျအရမျး တကျတဲ့ Severe Fever with Thrombocytopenia Syndrome (SFTS) ရောဂါ ဖွဈပွီး တရုတျပွညျ မှာ လူ ၇ ယောကျသကော အယောကျ ၆၀ ရောဂါကူးစကျခံ ထားရသတဲ့။ အဲ့ဒီတော့လညျး တရုတျမှာ သတိပေးကွညောခကျြထုတျလာတာပေါ့။ အဲ့ဒီ SFTS ရောဂါဖွဈစေ တဲ့ ဗိုငျးရပျဈမို့ SFTSV လို့အတိုကောကျချေါ တယျ ။ ဒါဆို ရငျကွောကျဖို့လို သလား …။ အဲ့ဒီ tick ဆိုတဲ့ မှားလို ကပျပါးကောငျလေးတှကေနေ လူကိုကိုကျရငျ ရောဂါဖွဈစတေယျ။ လူလူခငျြးမကူးဘူးတဲ့။ လူလူခငျြး Covid-19 ကူးသလိုမကူးလို့ ကနြျောတို့ဆီကို တရုတျပွညျကနေ ရောကျလာမှာကို သိပျစိုး ရိမျစရာမလိုပါဘူး။ ဒါပမေယျ့ အိမျမှေးတိရိစ်ဆာနျလေးတှရေဲ့ တကိုယျရသေနျ့ရှငျးရေးကို ဂရုစိုကျပေးဖို့လိုမယျ။
အိမျမှေး တိရိစ်ဆာနျလေးတှေ ကနေ tick အကိုကျခံရပွီး ကလေး၊ လူကွီးတှေ ရောဂါဖွဈမှာတော့ သတိထားကွပါ။
အဲ့ဒီ tick တှကေ တိရိစ်ဆာနျတှေ ကိုကိုကျရငျသာ Severe Fever with Thrombocytopenia Syndrome (SFTS) ရောဂါလက်ခဏာ မပွတာ လူကို ကိုကျ ရငျတော့ ကိုယျပူခြိနျ အလှနျ တကျတာ မြိုး ရောဂါလက်ခဏာပွ ပါ သ တဲ့ ။ အဲ့ဒီ SFTS ရောဂါက လူသဆေုံးနှုနျးမွငျ့တာကို ဂရုပွုပါ။ ဒါကွောငျ့ WHO ရဲ့ သတိထားရမယျ့ Top 10 priority ရောဂါ ဆယျမြိုးထဲမှာပါတယျ။ ဒီနရောမှာ ထပျဖွညျ့ပွောခငျြ တာက tick-brone diseases (tick ကိုကျရာကနေ ဖွဈတဲ့ရောဂါတှေ) က ၁၆ မြိုးရှိတယျ။ tick ကိုကျလို့ ရောဂါဖွဈစတောက ဗိုငျးရပျကွောငျ့ရော၊ ဘကျတီးရီးယားကွောငျ့ရော၊ ပရိုတိုဇူဝါကွောငျ့ရော ရောဂါပိုး မြိုးစုံကနေ ဖွဈနိုငျတယျ။
tick ကိုကျလို့ ဗိုငျးရပျကွောငျ့ လို့ထငျနပေမေယျ့ တခွားရောဂါ ပိုးတှကေ လညျး တခြိနျတညျး မှာရောဂါပွိုငျတူ ဖွဈစတေတျတာမို့ ရောဂါရှာရခကျပွီး ကုသရာမှာ ခကျခဲစေ တတျ တယျ ။ တရုတျမှာ ပဲဖွဈတယျ လို့ ထငျနေ လို့မ ရဘူး ။ အနောကျနိုငျငံမှာလညျး ဖွဈခငျြဖွဈတာပဲ ။ ထငျရှားတဲ့ ဖွဈရပျကတော့ မနှဈက ၂၀၁၉ ခုနှဈမှာ အသကျ ၆၆ နှဈရှိ အမရေိကနျအထကျ လှတျတျော အမတျဟောငျး Kay Hagan တဈယောကျ tick အကိုကျခံရလို့ ရောဂါဖွဈပွီး သခေဲ့ပါရောလား။
အခု တရုတျ မှာ ရောဂါဖွဈနေ တဲ့ tick မြိုး က အာရှမြိုးနှယျ Asian tick တဲ့ ။ အဲ့ဒီ Asian tick ကို Haemaphysalis longicornis လို့ချေါပွီး SFTS ရောဂါကိုဖွဈစတေဲ့ SFTSV ဗိုငျးရပျဈပိုးကို သယျဆောငျ တဲ့ အဓိက လကျသညျ လို့ ယူဆထား ပါတယျ။ အဲ့ဒီ ဗိုငျးရပျဈပိုးကို တရုတျပွညျ Hubei နဲ့ Henan ပွညျနယျရှိ ကြေးလကျ ဒသေတှမှော ၂၀၀၉ ခုနှဈ က စတှခေဲ့တာပါ။ Hubei က ဝူဟနျ့မွို့ရှိတဲ့ ပွညျနယျပါ။ အဲ့ဒီ ရောဂါဖွဈရငျ သနှေုနျး ၃၀ ရာနှုနျးရှိပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ သတိထားဖို့လိုတာပါ။ အဲ့ဒီရောဂါက တရုတျပွညျမှာ ပူနှေးတဲ့ မတျလကနေ နိုဝငျဘာလအတှငျး ဖွဈတတျပါတယျ။ သုသသေနတှအေရ ဧပွီလနဲ့ ဇူလိုငျလထဲမှာ ဖွဈပှားမှုအမြားဆုံး လို့ဆိုပါတယျ။ တိရိစ်ဆာနျတှနေဲ့ ထိတှရေ့တဲ့ လယျသမားတှေ၊ မုဆိုးတှေ၊ အိမျမှာတိရိစ်ဆာနျမှေးထား သူတှဟော tick အကိုကျခံ ရပွီး tick-brone virus ကူးစကျနိုငျ ပါသတဲ့။
အထူးသဖွငျ့ ဆိတျ၊နှား၊သိုး တို့ကနေ tick-brone virus ကူးစကျနိုငျတာ တှရေ့ပါသတဲ့။ အဲ့ဒီ SFTS ဗိုငျးရပျဈကူးစကျရငျ ဘာရောဂါလက်ခဏာတှပွေသလဲ ၂၀၁၁ တုနျးက တရုတျ သိပ်ပံပညာရှငျတှရေဲ့ လလေ့ာမှုအရ ရောဂါပိုးရှငျသနျပေါကျပှားတဲ့ incubation period က ရောဂါလက်ခဏာတဈခုပွအပွီးမှာ ၇ ရကျကနေ ၁၃ ရကျကွာပါသတဲ့။ ကိုယျပူခြိနျ တကျမယျ ၊ ပငျပနျးနှမျးနယျမယျ ၊ ခေါငျးကိုကျမယျ ၊ ခေါငျးမူးမယျ ၊ ဝမျးလြောမယျ ၊ အနျမယျ ၊ ဗိုကျနာမယျ ၊ myalgia လို့ချေါတဲ့ ကွှကျသားတှနောမယျ၊ anorexia လို့ချေါ တဲ့ အစား အသောကျလြော့ မယျ ၊ သှေးကွောလေးတှကေသှေး ယိုမယျ ၊ အာရုံကွောစနဈလက်ခဏာတှအေထိ စတာတှပေါပါသတဲ့။ စသိနိုငျတဲ့ early warning signs တှကေတော့ ကိုယျပူခြိနျအရမျးတကျတာ၊ သှေးခဲစတေဲ့ platelet တှနေညျးသှားလို့ သှေးမတိတျတော့တာ၊ သှေးဖွူဥနညျးတာတှေ ဖွဈစပေါတယျ။
အဲ့ဒီ SFTS ရောဂါဟာ တရုတျပွညျပွငျပ အနီးအနားမှာ ဘယျနရောမှာဖွဈသေး သလဲ..? ဂပြနျနဲ့ 🇰🇷 တောငျကိုရီးယားမှာ ဒီ SFTS ရောဂါဖွဈတာတှရေ့ပါတယျ။ ၂၀၁၃ မှာ တောငျကိုရီးယားမှာ ၃၆ ယောကျကူးစကျ ခံရတာကနေ ၂၀၁၇ မှာ ၂၇၀ အထိတကျလာ ခဲ့တယျ ။ တရုတျမှာဆိုရငျ ၂၀၁၀ မှာ ၇၁ ယောကျအကူးခံရပွီး ၂၀၁၆ မှာ လူ ၂၆၀၀ အထိကူးစကျခံရ ခဲ့ပါတယျ။
ဂပြနျနိုငျငံ မှာလညျး ၂၀၁၆ ကနေ ၂၀၁၇ အတှငျး ရောဂါကူးစကျခံရမှု ၅၀ ရာနှုနျး တိုးလာခဲ့ပါတယျ။ အခုလို ဂပြနျ၊ တရုတျနဲ့ တောငျကိုရီးယား သုံးနိုငျငံမှာ ဆရာဝနျတှနေဲ့ ပွညျသူတှေ ဟာ ဒီရောဂါအကွောငျးကို ပိုသိလာကွပွီး ဂရုစိုကျခြိနျမှာ သနှေုနျးဟာ သိသိသာသာကြ သှားကွောငျးလလေ့ာတှေ့ ရှိခဲ့ရပါသတဲ့။ ဒါဆိုရငျ SFTS ရောဂါကိုဘယျလို ကုသမလဲ…? SFTS ရောဂါကာကှယျဆေးက အခုထိမပျေါသေး ပါဘူးတဲ့။ ကွိုးစားနတေုနျးပါ။ Ribavirin ဆေးကတော့ အဲ့ဒီရောဂါကို ကုသရာမှာ ထိရောကျမှုရှိတာကို တှရေ့ပါတယျ။ အဲ့ဒီ tick အကိုကျခံရပွီး tick-brone virus အကူးမခံရဖို့က… မွကျတောထဲ၊ သဈတောထဲ သှားရငျ ဘောငျးဘီ အ င်ျကြီ အ တိုတှေ မ ဝတျ ဖို့ ၊ တိရိစ်ဆာနျကနေ tick အကိုကျမခံရအောငျ သတိထားဖို့ စတာတှေ သတိပွုရ ပါမယျ ။ ဘာပဲဖွဈဖွဈ tick ကနေ tick-brone virus ကူးစကျခံရနိုငျ တယျ ဆို တာ လူတှေ သ တိပွုဂရုစိုကျ တတျ လာ ရငျ သနှေုနျး ကြ ဆငျး သှား မှာ ဖွဈပါကွောငျး။
ပုပ္ပားတောင်ခြေက သာယာလှတဲ့ ဂန္ထဝင်ခြံကို ခြံပိုင်ရှင် ဦးရဲဝင်းအောင် ဆီက အမေစု တို့ သားအမိ နှစ်ယောက် ဝယ်ယူ ဖြစ်ခဲ့ ပုံ ဟာ ဆန်း ကြယ် လွန်း ပါတယ်